Kulan lagu Dhiiri-galinayay wax-soo-saarka Farsamada Gacanta oo lagu Qabtay Garoowe – Radio Daljir
Maajo 19, 2015 8:42 b 0
Talaado, May 19, 2015 (Daljir) — Madaxweyne ku xigeenka Puntland, Cabdixakiin Xaaji Cumar (Cameey), Wasiirka Waxbarashada Puntland, Cali Xaaji Warsame iyo Madaxda is-kuulada farsamada gacanta ee Puntland ayaa ka soo qayb-galay kulan lagu dhiira-galinayay wax soo saarka xirfadaha farsamada gacanta ee Puntland.
Qaban-qaabada kulankan oo ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada Puntland iyo hay’adda save the Children ayaa waxaa kaloo soo xaadiray qaar kamid ah xirfadlayda gobolka Nugaal ,kuwaasi oo goobta ku soo bandhigay qaar kamid ah Wax-soo-saarkooda.
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntlan Axmed Cali Shirre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah la siin doono wax soo saarka gudaha ,waxana uu dhiira-galiyay in la kordhiyo xarumaha farsamada gacanta ee ku yaala Puntland.
Wasiirka waxbarashada Puntland Cali Xaaji Warsame ayaa sheegay in ay ka go’an tahay sidii waxbarashad farsamada gacanta loo gaarsiin lahaa heer sare oo lamid ah tan asaasiga ah ee ay cid walba barato.
“Anigu waxaan kamid aha dadkii wax ku soo bartay dugsiyada farsamada gacanta ka hor intii aysan dhicin dowladdii Soomaaliya ,hadda waxaan diyaar – u nahay inaan dhiiri-galinno waxbarashada farsamada gacanta “ ayuu yiri wasiirka oo ka hadlay kulankii maanta.
Ugu dambeyn, madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakin Xaaji Cumar Camey ayaa ugu baaqay ganacsatada in ay ka qayb-qaataan dhiirri-galinta dugsiyada farsamada gacanta lagu barto, Wuxuuna xusay in dhalinyaradu ay Awood u leeyihiin soo saaridda Waxyaabo cajiib ah oo umaddu ay ka faa’idaysan karto.